Sehatra tsy miditra an-tsokosoko | Martech Zone
Sehatra tsy miditra an-tsokosoko
Alatsinainy, Septambra 25, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mbola mahita ody UI vs Browser App amin'ny lahatsoratra sy resaka manerana ny Internet aho. Google dia efa nanaporofo fa afaka manana rindranasa mpizara mpiorina tena matanjaka amin'ny fampiasana tranonkala fitetezana ianao. Tsy misy fisalasalana ao an-tsaiko fa ity ny ho avin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana tranonkala. Ny rafi-piasana amin'ny ho avy dia mety ho tranokala tsotra fotsiny ary ny mpampiasa dia afaka mampiasa, mamindra, ary manokatra rakitra manerana ny lozisialy fa tsy amin'ny mpanjifa rehetra. Io dia hamonjy amin'ny bandwidth na koa fitehirizana eo an-toerana, fiarovana ny virus, fanavaozana, sns, sns.
Mazava ho azy, io fivoarana io dia hanova ny fomba fiasan'ny fampiharana ihany koa. Namaky momba ny Ivon-toerana Raskin an-tserasera ary tsy fantany akory fa misy Ivotoerana nandinika ny fifandraisan'ny olombelona amin'ny solosaina. Wow. Mety mila maka ilay boky aho.
Apple dia efa mametraka ny teknolojia hiasa (tsy ampoizina!) Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fitaovany… tokony tsy ho ela dia manomboka mahita ity vokatra ity ao anaty rindrambaiko isika:
Douglas Karr Monday, September 25, 2006 Sunday, October 4, 2015
Maimaimpoana ny fahalalàna, tsy ny loharanom-pahalalana…